दोधारमा प्रम ओली : पहिले चीन जाने कि मोदीलाई स्वागत गर्ने ? - Everest Dainik - News from Nepal
दोधारमा प्रम ओली : पहिले चीन जाने कि मोदीलाई स्वागत गर्ने ?
काठमाडौं, वैशाख ९ । मोदी भ्रमण वैशाख अन्तिम साता, छलफलबिनै भारतले तोक्याे मिति
चैत तेस्रो साता भारतले तीनदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्ली रहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सवैजसो औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रममा भुगोलले सानोठुलो भए पनि नेपाल र भारतको हैसियत एउटै भएकोमा जोड दिएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस बोली फेरिएन प्रधानमन्त्रीको: दुई बर्षपछि पनि उस्तै भाषण
तर, महिना दिन नबित्दै उक्त भनाईविपरितका कुटनीतिक व्यवहार देखिएको छ । विशेषगरी भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको मिति तय गर्ने सवालमा ।
भारतको पछिल्लो प्रस्तावले काठमाडौंलाई अप्ठ्यारोमा पारेको देखिन्छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले पहिलो भ्रमण भारतकै गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिएका ओली त्यसपछि उत्तरी छिमेक चीनको भ्रमणमा जाने तयारी शुरु भईसकेको छ ।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
याे पनि पढ्नुस अाेलीले भने- मैले प्रचण्डजीलाई फोन गरेर सोधें, उहाँलाई पनि थाहा छैन